Video: Hetsika Teto Aho – Asa Soa Madinika Manova Izao Tontolo Izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2012 11:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 한국어, Español, عربي, English
Andao hiaraka aminay fa hitanay ny fiovan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ireo hetsika madinika natao nandritra ny Fanentanana Teto Aho amin'ny Andron'ny Firenena Mikambana Ho amin'ny Fanampiana Mahaolona Manerantany. Fomba iray hanekena ny asa vita tamin'ny fanampiana mahaolona manerantany ny alahady 19 aogositra; nanao fanasaha ho an'izao tontolo izao ny Firenena Mikambana sy ny mpihira Amerikana Beyoncé: manao izay hahatsara kokoa ny fiainan'olona iray hafa amin'ny alalan'ny fanaovana asa soa amin'ny hafa, na aiza na aiza.
Ny anton'ny nametrahana ny Andro Manerantany Ho Fanampiana ny Mahaolona ny andron'ny 19 aogositra dia ho fahatsiarovana ny nametrahana baomba ny foiben'ny Firenena Mikambana tamin'ny 2003 tany Baghdad, Iraq, izay nahafatesana olona roa amby roapolo. Manome voninahitra ireo maty noho fiezahana hanampy ny hafa ny andro sy ho an'ireo mbola manampy ny hafa isan'andro manerantany.
Raha feno vaovao ratsy, fijaliana ary hirifiry isan-karazany ny vaovao fahita, misy kosa ny tantara akaiky na lavitra izay ahitana olona manao asam-panaovantsoa betsaka na kely amin'ireo olona mila famonjena, manokatra ny tanana amin'ireo mijaly.
Ao amin'ny vohikalan'ny Teto aho (I Was Here), manome soso-kevitra amin'ny fomba tsotra hanampiana olona hafa, amin'ny finoana fa mety hisy fiantraikany goavana amin'ny androm-piainan'ilay olona ny asa soa madinidinika, ny Firenena Mikambana. Manampy olona hiantsena, manome sakafo tahaka ny sandwich ny tsy manan-kialofana, talentam-panampiana an-tsitrapo ho amina tetikasam-pokonolona, mijoro miaro olona mahazo fandrahonana na voaroba, mamangy beantitra na marary any amin'ny hopitaly. Angamba mahazo sakafo ho an'ny ray aman-dreny vaovao, manampy an-tsitrapo any amin'ny fikambanana manao asa soa, manao fanomezana zavatra tsy ilaina na tsy ampiasaina intsony, manao zavatra ho an'ny mpifanolo-bodirindrina tahaka ny manapaka bozaka, manadio zaridaina na mitari-dalana ny olona hiala amin'ny toerana sarotra. Rehefa mahavita zavatra ianao dia asaina hametraka ny anaranao sy hametaka pin ao amin'ny sarintanin'ny vohikala sy mamela ny olona hahafantatra ny fomba nanovanao ny androm-piainan'olona iray. Hita ao amin'ireo olona efa nametraka ny anarany tao amin'ny sarintany ireo nanampy olona nafindra monina tany Mali, manamafy ny feon'ireo mpialokaloka Sahrawi, nanome sakafo ho an'olona tena nila izany, mampianatra olona hamaky sy hanoratra ary hikarakara zaza.
Fangon'ny I Was Here (Teto Aho) Hetsika fanentanana 2012 Andro manerantany Fanampiana mahaolona
Efa voadika tamin'ny fiteny 22 samihafa ny antso hanatrarana vahoaka iray miliara izay mety manaraka ny antso hiasa amin'ny alalan'ny lahatsary ary hiasa ao anatin'ny andro iray, tanjona izany nihoarana rehefa nahazo olona 1.132.204.110. Efa voadika amin'ny fiteny 10 [Misy teny Malagasy ao] ny video sy ny hiran'i Beyoncé ary amin'ny alalan'ny fanoloran-tena [ao amin’] ny sehatra fandikana an-tsoratra, ny tanjona dia ny hahazo indroa avo heny araka izay tratra.
Inona ny asam-pikatrohana hataonao hametrahana ny marikao sy hanatsarana ny fiainana na andavanandron'olon-kafa?